सिंहले १९८३ सालतिर भारतमा गएर महात्मा गान्धीलाई भेटेका थिए । गान्धीकै प्रेरणाले उनी नेपालको राणा विरोधी आन्दोलनमा सक्रिय भए । उनी नै राणा विरोधमा ओर्लने पहिलो नेपाली थिए । यसैबारे उनैले भनेका पनि थिए ''अनधिकारी र स्वेच्छाचारी राणशासनको विरोधमा उठ्ने म प्रथम व्यक्ति हुँ ।'' नेपालमा पहिलो राजनैतिक दल खोल्ने पनि सिंह नै थिए र उनी प्रचण्ड गोर्खा दलका संस्थापकमध्येका एक थिए ।
आफूले भोगेका यस्तै विचित्रको अनुभव सिउरिएर सिंहले 'जेलमा बीस वर्ष भन्ने अमर ग्रन्थ लेखे । साथै जीवनको उत्तर्रार्धमा आएर उनले 'जेलबाहिर चालीस वर्ष भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कृति लेखे । यस ग्रन्थको शिरमा नै उनले नरेन्द्रराज प्रसाईलाई सम्बोधन गरेर लेखे ।
जेलबाट निस्केपछि राजा त्रिभुवनका कृपाले सिंहले प्रज्ञा राज्यलक्ष्मीसँग बिहे गरे । सिंह मन्त्री, राजदूत र अञ्चलाधीश पनि भए । उनले प्रथम दर्जाको गार्खा दक्षिण बाहु पनि पाए र त्रिशक्ति पट्ट दोस्रा पनि लाए । उनले मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेर राष्ट्र बनाउने सोच राखेका थिए । तर उनलाई विश्वबन्धु थापा र राजेश्वर देवकोटालाई झैं भाग्यले साथ दिएन । उनले नेपालका प्रायः सम्पूर्ण भूभाग र एसियाका साथै यूरोपका केही राष्ट्रको समेत भ्रमण गरेर अनुभव सङ्ग्रह गरे तर अनेक राष्ट्रघाति तत्वहरुको छिर्के झेल्नु परेकाले उनले मुलुकका लागि चाहेजति केही गर्न सकेनन् । वास्तवमा असल, महान् र त्यागीहरुलाई विटुलो पार्ने काममा पनि पञ्चायती व्यवस्थाले एउटा आधारभूत सिद्धान्त बनाएको थियो । त्यही पासोमा सिंह पनि फसेका थिए । यतिहुँदा हुँदै पनि उनले राजाको वकालतमा नै आफ्नो सम्पूर्ण जीवन फ्याँके । तर 'जेल बाहिर चालीस वर्षमा उनले आफ्नो मन लेखे । त्यस कृतिमा उनले भनेका थिए ''पञ्चायतका जरा उखेल्नु एउटा नमूना मात्र हो हेर्दै जाउँ अझै केके उखेलिन्छ !'' साँच्चे हो राजाका धुपौरेले सिंहजस्ता देशभक्तका पनि नाकमा घरिघरि नस हालिरहन्थे र यस्ता किसिमका क्रान्तिकारी किताब लेख्ने प्रेरणा दिइरहन्थे ।
सिंहको राजनीतिक जीवन हिंसात्मक क्रान्तिकारी पथबाट सुरु भयो । तर जेलमा गहिरो चिन्तन र गीता अध्ययनले उनको हृदयमा हिंसाको छाप मेटियो । उनी भन्थे ''हाम्रो समानताको बाटो समन्वयवाद हो ।''
सिंह सुरुमा प्रजातन्त्र अथवा संसदीय व्यवस्थाको मागमा समर्पित भए तर प्रजातन्त्र आउने वित्तिकै उनी भौंतारिन थाले । त्यसपछि उनले फेरि भने ''पार्टी हानथापले राष्ट्रको सामूहिक उत्थान हुन नसक्ने हुँदा २००८ सालमै दलगत व्यवस्था नेपालको निम्ति उपयुक्त भएन ।'' साथै राजाका अघिपछिका डुहुरे मुसाले काम गर्न नदिएको उनले सधैं गुनासो गरिरहे । उनी भन्थे 'सामूहिक रूपमा साझा प्रक्रियाद्वारा देश निर्माण गर्ने बुद्धिजीवीको आस्था भएको सरकार हुनु अत्यावश्यक थियो तर मन्त्रीहरू बुद्धिजीवी नै खोजिदैनथ्यो ।'' उनले क्रमशः आफ्नो राजनितीक जीवन पनि एक प्रकारको दूरभाग्यको नै ठानेका थिए । यतिहुँदाहुँदै पनि उनी नेपाली राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रुपमा राजाको आवश्यकतामा जोड दिन्थे ।
सिंह सधैं देश र जनसेवाको निम्ति नै लडे । जीवनको अन्तिम बेलामा आएर उनले भने ''मैले नेपालमा केही काम गर्न सकिन ।'' जीवनमा त्याग गर्दागर्दै सिंहको २०५३ सालमा काठमाडौमा निधन भयो । त्यसपछि नेपालले उनको खोजीनिति नै पनि गरेन । राजनीतिमा लागेका झारेझुरेको समेत हुलाक टिकट प्रकाशनमा आयो र कौशीमा बसेर तमासा हेर्दै गरेको मानिसलाई झुक्किएर गोलि लाग्दा पनि शहिद बनाइयो । तर सिंहका बारे सरकारी तहले चासो नै राखेन । उनले जीवनको उत्तर्रार्धमा पनि भनेका थिए ''राजनीतिमा लाग्ने सबै स्वार्थी, कपटी र धुर्त हुँदैनन्, हृदयमा स्नेह र सेवापरायण, समता र सद्व्यबहार धारण गर्ने पनि हुन्छन् ।'' तर नेपालका हकमा उनको सोचाइले कुनै धर्म निर्वाह गर्न सकेको देखिएन । नेपालीहरुका छातिभित्र संवेदनाको श्रोत नै सुकेकाले हिंजोको कालरात्रिमा नेपाल र नेपालीको उज्ज्वल भविष्यका लागि कठोर जीवन रोज्ने सिंहको योगदानको चर्चा हराउदै गयो । देशभक्त भएका कारण नै खड्गमान सिंह नेपाली राजनीतिमा असफल नै भएका हुन् त ? भन्ने प्रश्नले अब जरा गडिसकेको छ ।